Johani 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
11 Zvino paiva nomumwe murume airwara, Razaro wokuBhetani womumusha maMariya uye maMarita+ mukoma wake. 2 Chokwadi, iye akanga ari Mariya uya akazora Ishe mafuta anonhuhwirira,+ akapukuta tsoka dzake nebvudzi rake dzikaoma,+ aiva nehanzvadzi yake Razaro yakanga ichirwara. 3 Naizvozvo hanzvadzi dzake dzakatumira shoko kwaari, dzichiti: “Ishe, onai! uya wamunoda kwazvo+ ari kurwara.” 4 Asi Jesu paakazvinzwa akati: “Kurwara uku hakuna vavariro yokuuraya, asi ndekwokuti Mwari akudzwe,+ kuti Mwanakomana waMwari akudzwe nakwo.” 5 Zvino Jesu aida Marita nomunun’una wake naRazaro. 6 Zvisinei, paakanzwa kuti iye akanga achirwara, akabva aramba ari munzvimbo yaakanga ari kwemazuva maviri. 7 Pashure peizvi akabva ati kuvadzidzi: “Ngatiendeizve kuJudhiya.” 8 Vadzidzi vakati kwaari: “Rabhi,+ nguva ichangobva kupfuura vanhu vomuJudhiya vakanga vachitsvaka kukutemai nematombo,+ zvino mava kuenda ikoko zvakare here?” 9 Jesu akapindura kuti: “Hapana maawa gumi nemaviri echiedza chemasikati here? Kana munhu akafamba muchiedza chemasikati+ hapana paanorovera, nokuti anoona chiedza chenyika ino. 10 Asi kana munhu akafamba usiku,+ anorovera pane chimwe chinhu, nokuti chiedza hachisi maari.” 11 Akataura zvinhu izvi, uye pashure peizvi akati kwavari: “Razaro shamwari yedu azorora, asi ndiri kuenda ikoko kunomumutsa muhope.”+ 12 Naizvozvo vadzidzi vakati kwaari: “Ishe, kana azorora, achapora.” 13 Zvisinei, Jesu akanga ataura pamusoro porufu rwake. Asi vakafunga kuti akanga achitaura pamusoro pokuzorora akarara. 14 Naizvozvo, panguva iyoyo, Jesu akavataurira asingambovanzi kuti: “Razaro afa,+ 15 uye ndinofara nokuda kwenyu kuti ndanga ndisiko, kuti mutende. Asi ngatiendei kwaari.” 16 Naizvozvo Tomasi, ainzi Mumwe Wemapatya, akati kuvamwe vadzidzi: “Ngatiendeiwo, kuti tife naye.”+ 17 Zvino Jesu paakasvika, akawana kuti akanga atova nemazuva mana ari muguva.+ 18 Zvino Bhetani yaiva pedyo neJerusarema chinhambwe chemamaira anenge maviri. 19 Naizvozvo vazhinji vevaJudha vakanga vauya kuna Marita naMariya kuti vavanyaradze+ pamusoro pehanzvadzi yavo. 20 Naizvozvo, Marita paakanzwa kuti Jesu akanga achiuya, akanomuchingura; asi Mariya+ akaramba agere pamba. 21 Naizvozvo Marita akati kuna Jesu: “Ishe, kudai makanga muri pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa.+ 22 Asi ndinoziva kuti kunyange iye zvino zvinhu zvizhinji zvamunokumbira Mwari,+ Mwari achakupai.” 23 Jesu akati kwaari: “Hanzvadzi yako ichamuka.”+ 24 Marita akati kwaari: “Ndinoziva kuti achamuka pakumuka+ pazuva rokupedzisira.” 25 Jesu akati kwaari: “Ndini kumuka noupenyu.+ Anotenda mandiri, kunyange akazofa, achava mupenyu;+ 26 uye munhu wose mupenyu uye anotenda mandiri haangambofi.+ Unotenda izvi here?” 27 Iye akati kwaari: “Hungu, Ishe; ndakatenda kuti ndimi Kristu Mwanakomana waMwari, Uya anouya munyika.”+ 28 Paakanga ataura izvi, akaenda, akashevedza Mariya mukoma wake, achiti pachivande: “Mudzidzisi+ avapo uye ari kukushevedza.” 29 Mariya, paakanzwa izvi, akakurumidza kusimuka uye akanga otoenda kwaari. 30 Chokwadi, Jesu akanga asati apinda mumusha, asi akanga achiri panzvimbo iya yaakanga achingurwa naMarita. 31 Naizvozvo vaJudha vaiva naye mumba+ uye vakanga vachimunyaradza, pavakaona Mariya achikurumidza kusimuka achibuda, vakamutevera, vachifunga kuti akanga ava kuenda kuguva+ kunochema ikoko. 32 Naizvozvo Mariya, paakasvika kwakanga kuina Jesu akamuona, akawira patsoka dzake, achiti kwaari: “Ishe, kudai makanga muri pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa.”+ 33 Naizvozvo, Jesu paakamuona achichema uye vaJudha vakanga vauya naye vachichema, akagomera neshungu, akanetseka;+ 34 uye akati: “Makamuviga kupi?” Ivo vakati kwaari: “Ishe, uyai muone.” 35 Jesu akasvimha misodzi.+ 36 Naizvozvo vaJudha vakatanga kuti: “Onai, aimuda kwazvo sei!”+ 37 Asi vamwe vavo vakati: “Munhu uyu akasvinudza maziso+ ebofu aisakwanisa here kuita kuti uyu arege kufa?” 38 Nokudaro Jesu, pashure pokugomerazve mumwoyo make, akasvika paguva racho.+ Chokwadi, iro rakanga riri bako, uye pakanga paine dombo+ pariri. 39 Jesu akati: “Bvisai dombo.”+ Marita, hanzvadzi yomufi, akati kwaari: “Ishe, iye zvino anofanira kunge ava kunhuhwa, nokuti ava mazuva mana.” 40 Jesu akati kwaari: “Handina kukuudza here kuti kudai waizotenda waizoona kubwinya kwaMwari?”+ 41 Naizvozvo vakabvisa dombo racho. Zvino Jesu akatarira kudenga,+ akati: “Baba, ndinokuongai kuti mandinzwa.+ 42 Chokwadi, ndaizviziva kuti munogara muchindinzwa; asi ndataura nokuda kweboka revanhu+ riri pano, kuti vatende kuti makandituma.”+ 43 Paakanga ataura zvinhu izvi, akashevedzera nenzwi guru kuti: “Razaro, buda!”+ 44 Murume akanga akafa akabuda makumbo ake nemaoko zvakapomberwa nemachira,+ uye chiso chake chakanga chakapomberwa nejira. Jesu akati kwavari: “Musunungurei mumurege aende.” 45 Naizvozvo vazhinji vevaJudha vakanga vauya kuna Mariya uye vakaona zvaakaita vakatenda maari;+ 46 asi vamwe vavo vakaenda kuvaFarisi, vakavaudza zvinhu zvakaitwa naJesu.+ 47 Naizvozvo vapristi vakuru nevaFarisi vakaunganidza Sanihedrini,+ vakatanga kuti: “Toitei, nokuti munhu uyu anoita zviratidzo zvizhinji?+ 48 Kana tikamurega achiita izvi, vose vachatenda maari,+ uye vaRoma+ vachauya, votora nzvimbo yedu+ norudzi rwedu.” 49 Asi mumwe wavo, Kayafasi, akanga ari mupristi mukuru gore iroro,+ akati kwavari: “Hapana chamunomboziva, 50 uye hamufungi kuti zvinokubatsirai kuti munhu mumwe chete afire+ vanhu kwete kuti rudzi rwose ruparadzwe.”+ 51 Izvi, zvisinei, haana kuzvitaura iye pachake; asi nokuti akanga ari mupristi mukuru gore iroro, akaprofita kuti Jesu akanga achifanira kufira rudzi, 52 kwete rudzi chete, asi kuti aunganidzewo vana vaMwari vakapararira+ kwose kwose kuti vave vamwe.+ 53 Naizvozvo kubvira pazuva iroro vakarangana kuti vamuuraye.+ 54 Nokudaro Jesu akanga asingachafambizve kwose kwose pachena+ pakati pevaJudha,+ asi akabva ipapo, akaenda kunyika yaiva pedyo nerenje, muguta rainzi Efremu,+ uye akaramba ari ikoko aine vadzidzi. 55 Zvino paseka+ yevaJudha yakanga yava pedyo, uye vanhu vazhinji vakakwira kuJerusarema vachibva kuruwa, paseka isati yatanga kuti vazvichenese sezvaidiwa netsika.+ 56 Naizvozvo vakaenda vachitsvaka Jesu uye vaitaurirana pavaimira-mira mutemberi, vachiti: “Munofungei? Kuti haangauyi kumutambo here?” 57 Sezvineiwo, vapristi vakuru nevaFarisi vakanga varayira kuti kana paine munhu aizoziva kwaainge ari, aifanira kuzvitaura, kuti vamubate.